Yini Engidingekayo Ukuqala Ukugcina Izinyosi?
Indlela Yokufunda Ukugcinwa Kwezinyosi
Abaningi bezinyosi abasha ababukele amavidiyo we-YouTube, kodwa amaningi ala mavidiyo athathwa e-USA naseYurophu. Izinyosi zaseNingizimu Afrika ziziphatha ngokuhlukile; basuke behlukumezekile kakhulu ezweni lakithi futhi beba nemiphumela emibi uma uthola izinyosi zezinyosi uthi uShirley Downie we-Beeware. Ngakho-ke kuphakanyiswa ukuba uye esikoleni sokufuya izinyosi kanye / noma wenze ucwaningo oluningi ngabalimi bezinyosi nabaluleki abasungulwe.
Funda ngezinyosi ngokufunda noma ukuya enkambweni yokufuya izinyosi. Ukusebenza nomeluleki omuhle kuzokufundisa futhi ngezindlela ezingokoqobo zokuloba izinyosi. ENingizimu Afrika, 'I-Blue Book' ("Ukulondoloza Ubuningi eNingizimu Afrika" nguJohannesmeier et.al.) kubhekwa njengencwadi enhle kakhulu ekuloleni izinyosi.
Izihloko zokwenza izinyosi zihlanganisa inkolelo ezinyosi, ukuhlala kwazo, ukuphathwa kwezinyosi, ukukhulisa indlovukazi nokuvuna uju. Le nkambo izochaza nendlela yokukhetha nokusetha isidleke; thola imishini yokuhloma edingekayo; indlela yokuqoqa nokucubungula uju kanye nendlela yokuhambisa nokubamba izinambuzane.
Uma ungeke ukwazi ukuya enkambweni yokufuya izinkomo noma ngolwazi, zama ukuthola umeluleki njengomuntu onolwazi lwezinyosi ozimisele ukukwabelana ngolwazi lwakhe.
Kuphi Ongabeka Izindlu Zezinyosi?
Uma uhlala edolobhaneni, thola kumasipala uma kuvunyelwe ukugcina izinyosi ezisemaphandleni. Uma kunjalo, gcina imifuba okungenani ngamamitha angu-50 kude nezilwane nabantu. Ezindaweni zasemaphandleni, gcina imifuba kude nezinkukhu namahhashi, izinyosi azithandi iphunga lalezi zilwane.
Isayithi lapho izinyosi zigcinwa kuthiwa yizinyosi. I-apiary idinga ukuba ifinyeleleke, ivikeleke, iyomile futhi ivuliwe, kodwa ingabi yinto eqhwayo. Ngaphezu kwalokho, kudingeka ukuthi ukwazi ukuhlinzeka ngokudla namanzi ama-honeybees okungaphezu kuka-3 kuya ku-5 km ukusuka emthini.
Nakuba ezinye izindawo zingase zibe nokudla okwanele kwamakholoni ambalwa (izibungu), kungenzeka ukuthi azikwazi ukusekela kuyo yonke inkathi. Ngakho-ke, kungase kudingeke ukuhambisa amakholomu ezivuneni ezifanele uma sezimbali. Lokhu kungaba isevisi ebalulekile (yokukhokhela impova) kubalimi abanobhonasi obuningi obusika ku-beekeeper.
Hlala ucela imvume yomnikazi wendawo ngaphambi kokubeka imifuba yakho ezweni lakhe.
I-South African Bee Industry Organisation (SABIO) imelela abalimi bezinyosi eSouth Africa futhi iluleka bonke abafuyi bezinyosi ukuba babhalise imihlathi yabo noMnyango Wezolimo, Amahlathi Nezokudoba (DAFF).
Lapho Ungayithola Khona Inyosi Kanye Nekoloni
Ukuze uqale ukufuya izinyosi uzodinga i-koloni yezinyosi kanye nesifuba ukuze uzigcine. Kunezindlela eziningana zokuthola i-bee colony:
Ungathenga isibhamu kumuntu osungula izinyosi
Ungabamba isiphepho esisha (isibhamu sendle noma se-trek). Ukudoba kungcono ngesikhathi sasekuseni.
Ungakwazi ukuthuthela isikhukhula esivele sikhona emthanjeni. Noma kunjalo, lokhu kudinga ikhono.
Ungadonsela i-bee colony ngokugubha uju ngaphansi kwesifuba, usebenzisa ukukhwabanisa kwezokuhweba noma ngokugcoba i-lemongrass ngaphansi kwesibisi.
Izinyosi zingahlala kunoma yimuphi umgoqo onjengomhume, izimbobo ezihlahleni noma amabhokisi enkuni. Ukwakha indlu yezinyosi uzodinga isidleke. Lokhu kungathengwa kwenkampani yezinyosi. Kukhona abathengisi abaningi bezinyosi eziningana ezihlonishwayo kodwa enye idinga ukuqapha kakhulu umthengisi njengoba amanye ama-hives engakabikho ajwayelekile.
Ishibhile akuyona neze engcono kakhulu. Ngesinye isikhathi, abalimi bezinyosi bathengisa ama-hive asetshenzisiwe, kodwa lokhu kumele kubheswe ngaphambi kokusetshenziswa ukuvimbela ukudluliselwa kwezifo ku-swarm yakho. Ama-hives asetshenzisiwe angasetshenziswa ukubopha insipho entsha yezinyosi.
Izinsiza Zokufuya iZinyosi
Njenganoma yikuphi ukuzilibazisa noma ubuchwepheshe, udinga amathuluzi afanele ukusebenza ne-bee colonies. Uma imifantu ingalondolozwa kahle, ikoloni izoshiya isidleke futhi ifune indawo ephephile yokuxazulula.
Kunconywa ukuthi uthenge yonke i-zip-up kanye nesiguwu ukuvikela ubuso bakho nentamo ukuba ungabi yi-stung. Okunye okudingekayo kukhona isikhumba esihle noma amagilavu ​​we-PVC, ama-gaiters ukuvikela ama-ankle akho nezibhokisi. Njengengxenye yesikhwama se-beekeeper entsha, uzodinga ukubhema, ithuluzi lesifuba ne-bee brush. Kamuva, lapho kuvuna uju, kuyodingeka futhi ukukhishwa imishini.